Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Inta badan dadka Ingiriiska ah ma oggolaanayaan ganacsiyada aan la tallaalin
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Biritishka badankoodu ma ilaalin lahaayeen ganacsiyada aan la tallaalin
In ka yar kala bar dadka Ingiriiska ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay sii wadaan adeegsiga xirfadle aan la tallaalin.
22% jawaabeyaasha ayaa sheegay in taasi "hubaal" aysan mar dambe adeegsan doonin adeegyada xirfadlayaasha aan la tallaalin.
29% jawaabeyaasha ayaa yiri “malaha” waxay iska ilaalin doonaan xirfadlayaal aan la tallaalin.
20% dadka Ingiriiska ayaa “malaha” isticmaali doona meherado aan la tallaalin.
Sida laga soo xigtay ra'yiururintii ugu dambaysay ee la sameeyay oo la soo dhajiyay shalay, in ka badan konton boqolkiiba dadka deggan UK kuma laaban doonaan meheraddii ay hore u isticmaali jireen haddii qofka samaynaya meheraddaas aan la tallaalin.
Iyadoo dalku uu sii diirran yahay dowladda Xayiraadaha COVID-19 xagga ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa, in ka yar kala bar dadka reer Britain ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay sii wadaan adeegsiga xirfadle aan la tallaalin.
Ku dhawaad ​​rubuc (22%) dadka la wareystay ayaa sheegay in “hubaal” aysan ganacsi dambe la yeelan doonin xirfadlayaal aan la tallaalin, xitaa haddii ay lahaayeen macaamil wanaagsan muddooyinkii la soo dhaafay.
Sahaminta 4,631 dadka waaweyn ee Ingiriiska, ra'yiururinta ayaa lagu ogaaday in tirada badan - 29% - ee jawaabeyaasha ay yiraahdeen "malaha" mar dambe ma isticmaali doonaan xirfadle ay hore u ilaalin jireen iyagoo og inaysan "qaadanin oo [aysan] qaadan doonin COVID -19 tallaal. ”
20% dadka reer Britain waxay ku jireen xayndaabka, iyagoo qiray inay “malaha sii wadi doonaan adeegsiga” xirfadlaha, halka 14% ay ku dhegi doonaan xirfaddooda, toogasho ama tallaal la’aan. Inta soo hartay ma hubin-laakiin waxaa laga yaabaa inay dhowaan go'aan gaaraan, maaddaama dowladda UK ay sii waddo ka-fiirsashada baasaboorrada tallaalka ee waddanka oo dhan ka dib markii ay ku dhawaaqday inay tahay inay ku laabtaan goobaha nolosha habeenkii xiritaanka kadib.
Jawaabeyaasha koonfurta ee England waxay u badan tahay inay ka soo horjeedaan xirfadlayaashooda aan la tallaalin, halka kuwa waqooyiga ay u badan tahay inay la sii shaqeeyaan. Sidoo kale, codbixiyeyaasha muxaafidka ah waxay u badan tahay inay sii haystaan ​​xirfadlayaashooda, halka Liberal Democrats ay u badnayd inay dhinac iska tuuraan.
Jawaabeyaasha ra'yi ururinta ayaa u muuqda inay si isa soo taraysa u qaadanayaan xayiraadaha ay dowladdu saartay dhaqdhaqaaqyadooda, iyadoo 60% ay sida muuqata taageereen "baasaboorada tallaalka" qof kasta oo booqda hoyga xanaanada, jimicsiga, goobta dhacdada, baararka, makhaayadda, ama goob kale oo dadweyne oo ku urursan codbixin kale oo ay samaysay YouGov toddobaadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, su’aasha ayaa si yar si ka duwan loogu qeexay, iyadoo carrabka ku adkeyneysa la’aanta dhammaadka cad ee isticmaalka baasabooradaas iyadoo la weydiinayo jawaabeyaasha kaliya haddii ay taageereen baasaboorada tallaalka inta lagu guda jiro soo bixitaanka jab.
Dadka Ingiriiska ahi ma noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee leh nidaamka baasaboorka tallaalka ee la soo rogay iyada oo aan laga helin codbixiyayaasha. Talyaaniga iyo Faransiisku waxay horey u qaateen kaarar caafimaad inkastoo mudaaharaadyo baaxad leh, iyo qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka Mareykanka sida New York City waxay ku boorriyeen ganacsiyada Mareykanka ee gaarka loo leeyahay inay ku xoojiyaan waajibaadka tallaalka baasaboorradooda caafimaad. Dawlado kale ayaa riixay inay mamnuucaan baasabooradaas, taasoo u horseeday dawladda federaalka inay (hadda) u dhaafto gobollada iyo ganacsiyada.